ဒီကေဘီအေ ကလိုထူးဘော အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ် အနေနဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေထံ လက်နက်ချမှာ မဟုတ်ကြောင်း ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒု ၀န်ကြီးချုပ် ချလမ်း ကတော့ သူ့အနေနဲ့ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်နေမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး အနေနဲ့ အပြစ်မရှိကြောင်း ခုခံပြောဆိုနေရင် သူ့အနေနဲ့ ဖမ်းဝရန်းကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပေးဖို့
တရားရုံးကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာပါက အဖမ်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့လည်း ထိုင်းအစိုးရနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း
ထိုင်း ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
Very disappointed about Thai Government.
May 11, 2012 08:56 PM
I think this is not fair for Saw Lah Bwe. We are very mad about this. We are disagree with Thai Government.Pray for the result. Thailand has never done any good to us.